MONTHLY NEWSLETTER FEBRUARY, 2019
68 views 2020-02-11
၂၀၁၉ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် သတင်းလွှာရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ ဖေဖော်ဝါရီလထဲ မှာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အစည်းအဝေးများစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး GEN ၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် Capacity B... ဆက်ဖတ်ရန်.
MONTHLY NEWSLETTER December, 2019
89 views 2020-01-09
၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာအတွက် သတင်းလွှာရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ ဒီီီီီဇင်ဘာလထဲဲဲဲဲမှာ ၁၆ ရက်််တာ လှုပ်ရှားမှုကို အခမ်းအနားများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အများပြည်သူတို့၏ ပါဝင်မှု... ဆက်ဖတ်ရန်.
MONTHLY NEWSLETTER NOVEMBER, 2019
43 views 2019-12-12
Welcome to the November 2019 Edition of the GEN Monthly Newsletter! 16 Days of Activism has started in November and GEN and its members are busy with the campaign. This year, 16 Days of Activism events will be held in Nay Pyi Taw and Yangon and everyone... ဆက်ဖတ်ရန်.
M0NTHLY NEWSLETTER May, 2019
98 views 2019-05-28
Welcome to the May 2019 Edition of the GEN Monthly Newsletter! A month has passed again and May was suchaproductive month. A lot of workshops and events were organised and the call for proposal for EU ... ဆက်ဖတ်ရန်.
m0nthly newsletter april, 2019
127 views 2019-04-25
၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလအတွက် သတင်းလွှာရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ ဧပြီလမှ သင်္ကြန်ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ ပိတောက်ပန်းများ ပွင့်ဖူးခဲ့ပြီး လူတိုင်းဟာ သင်္ကြန်ရေကစားပွဲတောမှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့က... ဆက်ဖတ်ရန်.
114 views 2019-04-01
၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လအတွက် သတင်းလွှာရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ မတ်လ ၉ ရက်နေ့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီး အောင်မြင... ဆက်ဖတ်ရန်.